काठमाडौं । गणतन्त्र नेपालको संविधानको भाग ८ अन्तर्गत धारा ८३ ले संघीय व्यवस्थापिकाको व्याख्या गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ । जसलाई संघीय संसद भनिनेछ । प्रतिनिधिसभा तल्लो सदन हुनेछ भने राष्ट्रिय सभा माथिल्लो सदन । संघीय संसदमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका विधेयकहरुलाई राष्ट्रिय सभाले अध्ययन गरी प्रमाणिकरणको लागि राष्ट्रपतिकहा“ पठाउनेछ । यदि, विधेयकहरु सच्चाउनु छ भने पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाउने छ । यसको अर्थ, राष्ट्रिय सभाले विशेष सल्लाहकार सभाको रुपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यही राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अनेकौं विवाद र खिचातानीका बीच आगामी माघ २४ गते हु“दैछ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । अब, कुनै तिकडमबाजी भएन भने माघ २४ मा निर्वाचन हुनेछ र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरु निर्वाचित हुनेछन् ।
विवादमा राष्ट्रियसभा ?
अब कुनै खिचातानी नभए माघ २४ गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुनेछ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै संघीय संसदले पनि पूर्णता पाउनेछ । दशैंसम्म सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा बहुमतीय प्रक्रियाका आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन गर्ने गरी विधेयक तत्कालिन संसदमा पेश गरिएपनि दशैं लगत्तैको राजनीतिक समीकरणमा आएको परिवर्तनपछि विधेयक विवादित बन्यो ।
एमाले र माओवादी मिलेमा आफ्नो सीट खुम्चिने भयका कारण काँग्रेसले बहुमतीयमा किचलो गर्दै एकल संक्रमणीय मतको व्याख्या गर्न थाल्यो । विवादका बीच संसदबाट विधेयक पास हुन सकेन । सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठायो । निर्वाचनपछि लामो समयसम्म विवादित बनेको अध्यादेश पारित भएपछि भने राष्ट्रिय सभा गठनको बाटो त खुल्यो तर कहिले गर्ने विवाद कायमै रह्यो ।
विपक्षी दलहरुको चर्को विरोधपछि सरकारले माघ २४ लाई निधो गरेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि माघ २४ गते निर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएपनि अझै कैयौं कारणले यो कार्यतालिका प्रभावित हुन सक्नेछ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिष्द बैठकबाट सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोकिने विश्वास गरिएको थियो ।
तर, सरकारले गृहकार्य नपुगेको भन्दै प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्न ढिलाई गरिरहेको छ । जसका कारण प्रदेशसमाभामा निर्वाचित सांसदहरुले सपथ ग्रहण गर्न पाएका छैनन् । उनीहरुले सपथ ग्रहण नगरेसम्म राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउने छैनन् । राष्ट्रिय सभामा प्रदेश सांसदहरुको महत्वपूर्ण मतभार रहेको हुन्छ । यो गम्भीर र संवेदनशीलतालाई सरकारले सत्ता लम्व्याउने नाममा ढिलाई गरिरहेको बुझाई छ वामपन्थी गठबन्धनको, जो आगामी सरकारको नेतृत्वका लागि अधैयर्तापूर्वक बसिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले समेत समानुपातिक मतपरिणाम सार्वजनिक नगर्दा नयाँं सरकारको बाटो समेत रोकिएको छ । कांग्रेस नेतृत्व सरकार र आयोगको भूमिकाले नयाँ राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई समेतपछि धकेलेको बताउँछन् एमाले नेता भानुभक्त ढकाल ।
कसरी हुन्छ निर्वाचन ?
लामो राजनीतिक किचलोपछि अन्ततः निर्वाचन आयोगले आगामी माघ २४ गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने भएको छ । आयोगले प्रदेशका उच्च अदालत रहेको शहरमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्दैछ माघ २४ मा । ५सय ५० प्रदेश सभा सदस्य र ७ सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी १५ सय ६ जनाले राष्ट्रियसभाका उम्मेदवारहरुलाई भोट हाल्न पाउनेछन् । यसको अर्थ कुल मतदाता २ हजार ५६ रहनेछन् ।
राजनीतिक दलहरुबीच रहेको मतभिन्नताका बीच एकल संक्रमणीय मत प्रणाली र बहुमतीय मतप्रणालीका आधारमा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरु निर्वाचित हुने भएका छन् । प्रत्येक प्रदेशबाट खुलामा ५ जना एकल संक्रमणीय मतप्रणालीका आधारमा चुनिनेछन् भने महिला, दलित र अपांग गरी तीन जना बहुमतीय प्रणालीका आधारमा निर्वाचित हुनेछन् । एकल संक्रमणीय मत प्रणालीअनुसार प्राथमिकता क्रमका आधारमा एक उम्मेदवार निर्वाचित भएपछि उसलाई बढी भएको मत दोस्रो प्राथमिकता क्रमका उम्मेद्वारलाई जानेछ । यो क्रम अन्तिमसम्म सर्दै जानेछ । निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ हुनेछ भने स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मत भार १८ रहनेछ ।
लामो समय मौनता साँधेको निर्वाचन आयोगले पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन तयारी तिब्रताका साथ गरिरहेको छ । समानुपातिकको परिणाम सार्वजनिक नगरेको आयोगले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकोले ढिला बताएको छ । सबैखाले निर्वाचनहरुको मित सरकारले तय गर्ने कानुनी व्यवस्था भएका कारण ढिलाई भएको आयोग प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।
राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार को हुन्छन् ?
राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय सभामा कस्ता अनुहार पठाउँछन् भन्ने प्रश्न यक्ष बनेको छ । किनकी, अहिलेसम्मको चलनअनुसार दलहरुले आफ्ना आसेपासेहरुलाई आर्थिक लाभ लिनसक्नेहरुलाई निर्वाचनमा टिकट बाँडेको छ । अझ, समानुपातिक प्रणालीलाई त भद्दा ढंगले दुरुपयोग गरेका छन् । नेताहरुका आफन्त, भाई भतिजा, बुहारी, सम्धी सम्धिनी, नातासम्बन्धमा अलिकति कतैबाट जोडियो भने पनि उनीहरुले टिकट पाइहाल्ने संस्कार बसालिएको छ । नेताको पाउमा दाम चढाउन सक्नेहरुलाई टिकट दिएर र समानुपातिको क्रमसंख्या समेत बिगारेर पठाएको गलत संस्कारकै कारण आम जनताको नजरमा समानुपातिक सांसदहरुप्रति जनता त्यति सकारात्मक बनेको पाइंदैन ।
राष्ट्रिय सभा नेपालमा धेरैका लागि नौलो अभ्यास हो । यद्यपि, यो सभा धेरै पहिलादेखि अभ्यास हुँदै आएको छ । यसको अर्थ अहिले मतदाता बनेको युवा पुस्ताका लागि मात्र राष्ट्रिय सभाको अभ्यास नयाँ हो । राष्ट्रिय सभामा अब दलहरुले कस्ता व्यक्ति पठाउँछन्, त्यसका आधारमा संघीय संसदको मर्मबोध हुने देखिन्छ । दलहरुले समानुपातिक प्रणालीजस्तै राष्ट्रिय सभालाई भ्रष्टीकरण गर्ने थलो बनाउँछन् या, यसको मर्मअनुसार प्रतिनिधिसभाको सल्लाहकार सभाको रुपमा वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरु र विषय विज्ञ पठाउँछन्, आगामी माघ १० गते उम्मेद्वारको नाम दर्ता गर्ने दिनमा थाहा हुनेछ । राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा धेरै सांसदहरु पाउने पक्का भएको नेकपा एमालेले योग्य र दक्ष उम्मेदवारहरुलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि पठाउने तयारी गरिरहेको बताएको छ ।
संविधानमा भएका केही जटिलता अनि राजनीतिक दलहरुको स्वार्थका कारण राष्ट्रिय सभा गठनको विषय त्यत्तिकै पेचिलो बन्दै गएको छ । काँग्रेस नेतृत्वकै सरकारका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले तत्कालिन संसदमा पेश गरेको बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत अहिले निर्वाचन हुंदै गरेको भए, वाम गठबन्धनले राष्ट्रिय सभालाई लगभग क्लिन स्वीपको अवस्थामा पुर्याउँथ्यो ।
असोज १७ गते बाम गठबन्धन बने वित्तिकै भाउन्नीएको काँग्रेसले यही बुझेर नै एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीमा फर्कियो । संसद्बाट बहुमतीय प्रणालीलाई पारित नगरी भुत्ते बनाएर अध्यादेशमार्फत आफु अनुकुलको निर्वाचन प्रणाली ल्याउन सफल भयो । अब काँग्रेस र मधेशवादी दलका पनि केही सांसदहरु राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुने पक्का छ । तर, काँग्रेसले पनि प्रतिनिधिसभामा हारेका या आफ्ना आसेपासेलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान्छ कि भन्ने आशंका बढेको छ । किनकी, जागीर पाए त आफ्नैले पाए भन्ने उखान काँग्रेसमा सबैभन्दा बढी चल्ने गर्छ ।
राष्ट्रिय सभाको मर्मलाई मारिएन भने यो सभामा सबै राजनीतिक दलहरुबाट वरिष्ठ, पाका, राजनीतिमा खारिएका, कुनै पनि विषयमा गहन अध्ययन गर्न सक्ने व्यक्तिहरु जानेछन् । यसकैका लागि नै हो संविधानले प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनलाई उमेरको हदवन्दी २५ वर्षको तोकेको छ भने राष्ट्रिय सभालाई ३५ वर्ष । कानुन बनाउने ठाउँमा हुने कुनै पनि गल्तीलाई परिपक्क राजनीतिज्ञ र विषय विज्ञले मात्र बुझन सक्छ ।
राष्ट्रियसभा केका लागि ?
नेपालको संविधानले दुई सदनको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ८३ मा संघीय व्यवस्थापिका हुने भनिएको छ, संविधानको धारा ८४ मा प्रतिनिधिसभा र धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठन काम कर्तव्य अधिकारको प्रावधान रहेको छ । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने भए पनि राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल कहिल्यै समाप्त हुँदैन । तर, पहिलो पटक निर्वाचित राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुबीच गोलाप्रथाको माध्यमबाट पहिलो दुई वर्षकार्यकालका लागि एक तिहाई सांसदहरु छुट्याइन्छ ।
यस्तै चारवर्षका लागि अर्को एकतिहाई र छ वर्षका लागि अर्को एकतिहाई । पहिलो दुई वर्षमा कार्यकाल सकिने सदस्यको ठाउँमा पहिला जुन विधिबाट निर्वाचन भयो सोही विधि प्रयोग गरी निर्वाचन हुनेछ । यसरी दुई चार र छ वर्षको श्रृंखलाबाट राष्ट्रियसभाको निरन्तरता पाउनेछ जबसम्म संविधान संशोधन गरी नयाँ नियम बन्ने छैन या यो संविधान नै खारेज हुनेछैन । आगामी माघ २४ गते हुन गइरहेको राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुने राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको कार्यकाल काम कर्तव्य र अधिकार संविधानतः हुनेछ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि नेपालमा दुई सदनात्मक अभ्यास भएको थियो । २०४७ सालको संविधानले राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरेको थियो । २०४८ को आम निर्वाचनबाट दुइ सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गठन भएका थिए । अमेरिका र भारतमा पनि माथिल्लो सदन र तल्लो सदन अभ्यास भैरहेको छ ।
संघीय संसदमा सन्तुलन कायम गर्नका लागि दुई सदनको व्यवस्था हुने गर्दछ । आर्थिक विधेयक बाहेक अन्य विधेकहरु प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभामा पठाउने र राष्ट्रिय सभाले अनुमोदन वा परिमार्जन गरेपछि मात्र राष्ट्रपति समक्ष पठाउने छ । यसकारणले दुई सदनको व्यवस्था गरिएको हो । दुवै सदनको काम कर्तव्य र दायित्व संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार हुने बताउँछन् पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ ।
राष्ट्रिय सभाको महत्व भएर नै संविधानले दुई सदनको कल्पना गरेको हो । यद्यपी २०४७ सालको संविधानले पनि राष्ट्रिय सभा व्यवस्था गरेपनि खार्सै प्रभावकारी बन्न नसकेको इतिहास छ, राष्ट्रिय सभा विज्ञहरु पाकाहरुको सभा पनि भएकोले संकटको बेला सही निर्णय गर्न सक्ने सदन बनोस भन्छन नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी ।
अमेरिकामा राष्ट्रपतिलाई विशेष निर्णय लिनुपर्यो भने माथिल्लो सदन सिनेटले सुझाव दिने गर्छ । भारतको माथिल्लो राज्यसभामा हुने बहस र त्यसले गर्ने निर्णयले त्यहाँको सरकारलाई प्रभावित पार्छ । तर, नेपालमा २०४७ सालमा पनि राष्ट्रिय सभाले त्यति महत्वपुर्ण काम गर्न सकेन । राष्ट्रिय सभा केही व्यक्तिहरुलाई जागिर खुवाउने थलो बनाइयो । अहिले पनि त्यस्तै गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन भन्ने आम मत रहेको छ । राष्ट्रिय सभा जिम्मेवार र वौद्धिक व्यक्तित्वहरुको सभाको रुपमा परिकल्पना गरिएको हो । त्यसैले राष्ट्रिय सभामा राजनीतिक दलहरुले त्यही हैसियतको प्रतिनिधित्व पठाउनुपर्छ ।